CEG ANTANIMENA | GAZETY_ADALADALA
Posted on 09/05/2008 by gazetyavylavitra
Izaho izay miantso dia manan-janaka roa manovo fahalalana ao amin’ny CEG Antanimena.
Tamin’ny 30 avril dia nalefa hiala sasatra ireo mpianatra ary hiditra amin’ny 13 mai
Misy anefa ny kilasy hanao adina ara-panatanjahantena BEPC amin’ny talata 13 mai Isan’izany ny zanako.
Talohan’ny nivoahan’ireo mpianatra ireo hiala sasatra anefa dia tsy nisy fanamarihana na dia kely aza nataon’ny tompon’andraikitry ny sekoly momba ny resaka fiantsoana hanao adina ara-panatanjahantena ho an’ny kilasy hiatrika izany
Noho izany dia tsy naheno hoe tokony haka fiantsoana any an-tsekoly ary hamonjy eny Mahamasina amin’ny 7h30 maraina ny maro raha tsy ny namany mpanao cours FRAM ao amin’ny CEG no niantso tél azy.
Ny zanako aloha dia tsy isan’ireo manao ilay cours FRAM. Ary mazava ho azy fa tsy nahalala velively raha ny sekoly no nantenaina.
Niantso raiamandreny hafa aho nanontany ary dia tahaka izay koa no fomba nahalalan-janany fa tokony haka ny fiantsoana hanao adina ara-panatanjahantena any an-tsekoly ny tenany. Marihako eto fa raiamandrenina mpianatra amina kilasy hafa mihitsy no nifampiresahako fa tsy hoe ankizy iray kilasy amin’ny zanako akory
Ireo ankizy avy eo no nifampiantso sy nifampizara vaovao amin’ny telefona
Tao aza ireo nandehanan’ireo namany tsara sitrapo tany an-tokantranon-draiamandreniny mihitsy mba hilazany hoe alaivo ny convocation’ialahy na ny an-dry fa ny anay efa azo fa amin’ny talata anie ny Gymn e!
tsy ny rehetra tokoa mantsy no hanana telefona any antokantrano, na finday. Ary tsy ny ankizy rehetra koa no hanana namana manao cours FRAM mba hampita vaovao aminy.
Isaorana eto ny fandraisana andraikitra sahady nataon’ireny mpianatra mitsinjo ny sasany ireny Fa mba aiza ho aiza amin’izany ny fahatsiarovan-tena sy fandraisana andraikitry ny sekoly, raha sanatria ka tsy mahatratra ara-potoana ny adina ny mpianatra noho ny nataon’izy ireo?
Tsy fantatro aloha hatreto hoe avy aiza no nisy ny tsy fahaizana nandray ny andraikitra ara-potoana tany amin’ny fari-piadidiam-pampianarana ve sa tao amin’ny CEG Antanimena mihitsy izahay moa izany dia efa matetika mihitsy no mitondra fanamarihana ao an-tsekoly momba ny fikorontanana eo amin’ny lafiny fandaminana toy izao e! Nandritry ny 4 ans. Betsaka noho izany ny ankizy no mety tsy hahafantatra akory hoe tokony haka fiantsoana. Ary ny tena loza dia raha nisy lasa niala kely ny renivohitra ireny ankizy ireny ary tsy mihevitra ny hiverina raha tsy vita ny alatsinainin’ny Pentekoty
Miantso anareo mpianatra aho noho izany mba hifampilaza fa sao voa mafy ny namantsika
ITY HAFATRA ITY DIA DIKA MITOVY NY HAFATRA NIFAMPIRESAHAKO TAMIN’NY RADIO DON BOSCO TAMIN’NY 08-mai-2008 (antso an-tarobia tamin’ny 6 ora maraina).
Nilaza ny hanao recoupement moa ilay nandray ny antso fa mbola manomana vaovao, hono, ary avy eo dia hiantso ahy amin’ny valo ora. TSY NIANTSO ANEFA IZY HATRAMIN’IZAO. TSY HAIKO IZAY ANTONY.
KOA HO ANAO MAMAKY AZY, AMPITAMPITAO LAVITRA AZAFADY MBA TSY HAHAFATY NY HAVANA SY NAMANTSIKA
Filed under: fiaraha-monina, tapatapany | Tagged: adina, fampianarana, fanadinana, fiantsoana, tandrevaka |
« FOMBA FIJERY_1 LAPAN’NY TANANA VAOVAO (Antananarivo) »
pissoa, on 09/05/2008 at 7:45 said:
Gravy koa izany !
Raha tsy tonga amin’io nefa mety ho ny taona iray manontolo mihitsy no ho faty ho an’ny mpianatra.
ikalamako, on 15/05/2008 at 12:54 said:
hoatran’ny tonga dia mahakivy be izany ny mieritreritra azy. Tss, izany ve dia mba sekoly…